သေးငယ်သော မစ်ဂျစ်လန်နစ် တိမ်တိုက် - ဝီကီပီးဒီးယား
သေးငယ်သော မစ်ဂျစ်လန်နစ် တိမ်တိုက်
ကိုဩဒိနိတ်: 00h 52m 44.8s, −72° 49′ 43″
တူကင်နာ နှင့် ဟိုက်ဒရပ်
00° 52′ 44.8″
သေးငယ်သော မစ်ဂျစ်လန်နစ် တိမ်တိုက် သည် နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီအနီးမှ ဂယ်လက်ဆီပုဖြစ်ပြီး ပုံစံအတည်တကျမရှိသော ဂယ်လက်ဆီပုဟု ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ ယင်းသည် အချင်းအားဖြင့် အလင်းနှစ် ၇၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး ကြယ်ပေါင်း မီလီယံရာချီကာ တည်ရှိသည်။ ထုထည်စုစုပေါင်းသည် နေထက် အဆပေါင်း ၇ ဘီလီယံ ကြီးမားသည်။ သေးငယ်သော မစ်ဂျစ်လန်နစ် တိမ်တိုက်သည် တချိန်က ခရုပတ်ပုံစံ ဂလက်ဆီဖြစ်သည်ဟု တွက်ချက်ထားပြီး နဂါးငွေ့တန်း ဂလက်ဆီကြောင့် ပုံစံမမှန်သော ဂလက်ဆီဖြစ်ခဲ့သည်။ အလင်းနှစ် ၂၀၀,၀၀၀ အကွာမှ သေးငယ်သော မစ်ဂျစ်လန်နစ် တိမ်တိုက်သည် နဂါးငွေ့တန်း၏ အနီးဆုံးအိမ်နီးချင်းဖြစ်ပေသည်။ ယင်းသည် သာမန်မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်သည့် အဝေးဆုံး အရာဝတ္ထုတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ မြို့ပြမီးအလင်းရောင်နှင့် ဝေးရာမှ ကြည့်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သေးငယ်သော မစ်ဂျစ်လန်နစ် တိမ်တိုက်သည် Local Group၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
ကြီးမားသော မစ်ဂျစ်လန်နစ် တိမ်တိုက်
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ ၁.၇ ၁.၈ ၁.၉ NASA/IPAC Extragalactic Database။ Results for Small Magellanic Cloud။ 29 November 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2006-12-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hilditch, R. W. (2005). "Forty eclipsing binaries in the Small Magellanic Cloud: fundamental parameters and Cloud distance". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 357 (1): 304–324. doi:10.1111/j.1365-2966.2005.08653.x. Bibcode: 2005MNRAS.357..304H.
↑ ၃.၀ ၃.၁ "Magellanic Cloud." Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 30 Aug. 2009 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/356551/Magellanic-Cloud Archived2May 2015 at the Wayback Machine.>. ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; name "britannica.com" defined multiple times with different content
↑ The Small Cloud of Magellan။ Astronomy Picture of the Day။ NASA (2006-06-17)။
↑ APOD: 2005 June 17 - The Small Cloud of Magellan။ 2010 August 8 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2017 March 12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA ADS - The total mass and dark halo properties of the Small Magellanic Cloud။4September 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 March 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Staff။ Small magellanic Cloud။ NASA/IPAC။7November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-07-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သေးငယ်သော_မစ်ဂျစ်လန်နစ်_တိမ်တိုက်&oldid=688198" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။